प्रमुख क्रेडिट के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा हेर्नुहोस्
सुरु ऋण wiki ठूलो जोखिम
एक प्रमुख क्रेडिट के हो?
एक अन्तर्गत ठूलो जोखिम एक क्रेडिट बैंकिंग प्रणाली मा वर्गीकृत गरिएको छ, जुन एक लाख देखि अधिक यूरो को बराबर हुन्छ ऋण रकम छ। एक निजी उपभोक्ताको रूपमा, तपाईं यस प्रकारको कुनै पनि किसिमको क्रेडिट लिन चाहानुहुन्छ, जबसम्म तपाईले यो प्राकृतिक प्रकृतिको यस्ता रकमहरू लगानी गर्नुहुन्न। ठूला-साना ऋणको स्थितिमा, विशेष गरी बैंकहरू को रिपोर्टिङ दायित्वहरू लागू हुन्छन्। प्रमुख क्रेडिटको बारेमा तपाईलाई के गर्नु पर्छ? एक ठूलो ऋणको लागि जोखिम मूल्यांकन निस्सन्देह, हरेक ऋणको लागी, तर पहिले नै उल्लेख गरिएको रूपमा, ठूलो ऋण सामान्यतया उधारकर्ताहरूको संघ वा सार्वजनिक कानुनको कानुनी व्यक्तिले माग गरेको छ। त्यसोभए ठूलो क्रेडिट को केहि विशिष्टताहरू जुन तपाइँ परिचित हुनु पर्छ।
जसले ठूलो ऋणको दावी गर्दछ
तपाईं आफैलाई सोध्नु हुनेछ जब मेरो एक लाख र अधिक मिलियन यूरोको क्रेडिट हुनेछ? एक संभावना एक सम्पत्ति मा लगानी हुनेछ, तथापि, तपाईंको क्रेडिट मूल्याङ्कन पनि बहुमूल्य हुनु पर्छ। तपाईंसँग पहिले नै ठूलो क्रेडिटको लागि आयको धेरै उच्च स्रोत हुनेछ ताकि बैंकले तपाईंलाई क्रेडिटव्याथी ग्राहकको रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ। ठूलो ऋण, उदाहरणका लागि, प्रतिभूति व्यापारको लागि पनि मांग छ र, जस्तै मैले भने, यस्तो ऋणले 250.000 यूरोको रकम समावेश गर्दैन, तर एक लाख रकम। यो स्पष्ट गर्न तपाईलाई एक पटक, हामी रिपोर्टिंग आवश्यकताहरु लाई एक पटक आउँछौं जुन लागू कानून बाट प्राप्त हुन्छ। तथापि, यो क्रेडिट बन्डेसबैंकलाई निश्चित स्तरमा रिपोर्ट गर्न सकिन्छ। इवेर्ड्स सेन्टरका लागि यी रिपोर्टहरू महत्त्वपूर्ण छन् ताकि सधैँ हदसम्म पारदर्शी हुनका लागि प्रमुख ऋणको लागी कम्पनीहरू र उधारकर्ताहरू जिम्मेवार छन्। यहाँ, पनि, यी ऋणहरू विस्तारित जोखिमको अधीनमा छन्, र यहाँ बैंकिङहरू पनि यो नजिक छन् कि तपाई यस्तो वित्त पोषण स्वीकृत गर्नुहोस्। रिपोर्टिङ दायित्व ठूलो ऋणको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ, किनभने उधारकर्ताहरूले विभिन्न बैंकको घरमा एकै समयमा यी ठूला ऋणहरू लिने छैनन्, ताकि उधारकर्ताहरूको नियन्त्रित ओभर-अपरिहार्य छैन।
ठूलो क्रेडिट र यसको अनुदान
मुख्य ऋण प्रायः एक लगानी ऋण वा ऋण हो जुन उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ। उधारकर्ताको कम्पनी वा उधारकर्ताको रूपमा कम्पनीले यस्तो ऋणको साथ निश्चित लगानी उपायहरू लिन चाहान्छ, जसले ऋणदाताको लागि निकै महत्त्वपूर्ण साबित हुनुपर्छ। सार्वजनिक क्षेत्रले यी लगानी उपायहरूको लागि ठूलो-फरक ऋण प्रयोग गर्दछ। नगरपालिकाहरू र जिल्लाहरू पूंजीको पूरै तुलनामा लगानीको उपायहरूको लागि ठूलो क्रेडिटसँग सम्बन्धित छन्। एक ठूलो ऋण संग सम्बन्धित विभिन्न कानूनी र कानूनी नियमहरू छन्। उदाहरणको लागि, धन लन्चिंग कानून, लाखौं क्रेडिट उधार विनियमन र समान कानुनी प्रावधानहरू जुन पहिले नै विभिन्न सुरक्षा साधनको लागि प्रदान गरिन्छ जब ठूलो मात्रामा ऋण क्षमा गरिनेछ। तपाईं यी ऋणहरूको बारेमा जान्न आवश्यक छ कि आज यी लगानीकर्तालाई आर्थिक ब्याज दर र यस प्रकारको क्रेडिटको साथ अचल सम्पत्तिमा सबै लगानी भन्दा माथि सोधिएको छ। मुद्दा सधैं लाखौं डलरको ऋण लाग्दछ र रकम आंशिक रूपमा खगोलीय छन्। यी ऋणहरू बैंकिंगमा र बैंकिङका बीच उधारमा एक पछि लाग्ने विकल्प पनि छन्। यहाँ, प्रतिभूति र अन्य पूंजी गहन लेनदेन यस स्तर मा यस ऋण संग वित्त पोषित छन्। यी ऋणहरू केवल कम्पनीहरू र संस्थाहरू द्वारा आवश्यक छ, किनकि यो छ जहाँ चासो दलहरूको सर्कल अवस्थित छ। त्यहाँ व्यक्तिहरू जसले आफ्नो ऋणको साथ व्यवसायमा सार्वजनिक रुचि प्रदान गरेका छन्। केवल केहि अचल सम्पत्ति उद्यमीहरु को बारे मा सोचना, जो कानूनी व्यक्तियों को रूप मा, बैंकों देखि ठूलो ऋण को उपयोग गरेको छ र यसैले अधिक overindebted भएको छ। ऋणहरू अपवाद छैन, तिनीहरू विशेष विशेषता हुन् जसका थुप्रै कानूनी नियमहरू छन् क्रेडिट जोखिम सुरक्षित र कम। ठूला ऋणहरू सामान्य ऋण हुन्, जुन भोल्युममा मात्र उच्च छ।
अघिल्लो लेखआवरण व्यक्तिगत ऋण
अर्को लेखअचल सम्पत्ति ऋण